I-China Rhweba ngaphakathi 2020 isityalo esitsha esitsha iziqhamo zeapile kunye nabenzi bexabiso elifanelekileyo kunye nabathengisi | AGR
1.Iapile sisiqhamo esimnandi, nesityiwayo somthi iMalus domestica. Sisiqhamo esisisangqa esinokuza ngobukhulu obahlukeneyo kunye nemibala
ezifana tyheli, luhlaza okanye bomvu. Ii-apile zihlala zimnandi kakhulu kwaye i-cam ityiwa intsha okanye isetyenziswe ekutyeni, iisosi, ukusasazeka, iijusi okanye
ipie yeapile edumileyo. Imbewu ye-apile nayo ingatyunyuzwa ukuze kukhutshwe ioyile, esetyenziselwa ishishini lezithambiso. Iziqhamo ziqulathe ubukhulu becala iicarbohydrate, iswekile kunye nefayibha ngamanqanaba amancinci weprotein kunye namafutha.
Iiapile ezi-2 zeFuji zibonakaliswa ngobungakanani bazo obukhulu, zibomvu zonke, imilo ejikelezileyo, kunye nobukhulu obuphakathi njengebhola. I-9-11% yobunzima besiqhamo yi-monosaccharides, kwaye inyama yayo icwecwe, iswiti kwaye iyabumnandi kunezinye iindidi ezininzi zeapile, ke iyathandwa ngokubanzi ngabathengi kwihlabathi liphela.
Xa kuthelekiswa namanye ama-apile, iiapile zeFuji zineyona nto ingcono ngaphambi komhla kwaye akukho mfuneko yokuba zigcinwe kwifriji. Ingagcinwa ixesha elide kubushushu begumbi. Ukuba ii-apile zifakwe emanzini ayi-5% amanzi anetyuwa kangangemizuzu eli-10, zomisiwe, zafakwa engxoweni yokugcina entsha, zatywinwa zaza zafakwa efrijini, iqondo lobushushu lilawulwa ngo-0-40 ℃, kwaye inokugcinwa ngaphezulu kweenyanga ezi-5 .
Imnandi kwaye iqunjelwe, iziqhamo ze-apile sesinye seziqhamo ezithandwayo nezithandwayo phakathi kwezempilo, abathandi bomzimba abakholelwa ngokuqinileyo kwingcinga yokuba "impilo bubutyebi." Esi siqhamo simangalisayo sipakishwe zizityebi ze-phyto-izondlo, eziyinyani, ebaluleke kakhulu kwimpilo efanelekileyo.
Imnandi kwaye iqunjelwe, iziqhamo ze-apile sesinye seziqhamo ezithandwayo nezithandwayo phakathi kwezempilo, abathandi bomzimba abakholelwa ngokuqinileyo kwingcinga yokuba "impilo bubutyebi." Esi siqhamo simangalisayo sipakishwe zizityebi ze-phyto-izondlo, eziyinyani, ebaluleke kakhulu kwimpilo efanelekileyo. Ezinye i-antioxidants kwi-apile zineempawu ezininzi zokukhuthaza impilo kunye nokukhusela izifo, kwaye ngenxa yoko, zithethelela isaci esithi, "iapile ngemini igcina ugqirha engekho."
Okulandelayo: I-China iVenkile ePhakamileyo yoKhuphiswano amaxabiso aBomvu kwi-Apple entsha
China Ihowuliseyili High Umgangatho uKhuphiswano Ixabiso ...